Tin Maung Hlaing: ပေါရိသာဒ နှင့် နတ်ချစ် ဂါထာများ
လောကစောင့်ကြပ် နတ်များအပေါင်းတို့၊ ဤအရပ်ဋ္ဌာနသို့ တရားနာရန် လာကြပါကုန်လော့၊
မြေစောင့်နတ်၊ ရေစောင့်နတ်၊ သမုဒ္ဒရာစောင့်နတ်၊ ၀လာဟကနတ်၊ ပဇ္ဇုန်နတ် အာကာသစိုး၊ ဘုမ္မစိုး၊ ရုက္ခစိုး အစရှိကုန်သော နတ်မြတ်နတ်ကောင်း နတ်အပေါင်းတို့၊ ဤအရပ်ဋ္ဌာနသို့ တရားနာရန် လာကြပါကုန်လော၊
နဂါး ၊ ဂဠုန် ၊ ဂုမ္ဘာန်၊ ယက္ခိုက် အစရှိသော သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ ဤအရပ်ဋ္ဌာနသို့ တရားနာရန် လာကြပါကုန်လော့၊
၀ိဇ္ဖာ၊ ဇော်ဂျီ တပသီ အစရှိကုန်သော ဥပါသကာအပေါင်းတို့၊ ဤအရပ်ဋ္ဌာနသို့ တရားနာရန် လာကြပါကုန်လော့၊
အလုံးစုံသော အပါယ်( ၄ ) ဘုံသားအပေါင်း၊ လူအပေါင်း နတ်အပေါင်း ဗြဟ္မာအပေါင်းတို့ ဤအရပ်ဋ္ဌာနသို့ တရားနာရန် လာကြပါကုန်လော့၊
အကျွနုပ်သည် ကဿပဘုရားရှင်သည် ဟောကြားထားတော်မူထားအပ်သော တဂါထာလျင် အဖိုးတသိန်းစီ ထိုက်တန်သော အလွန်ကြားနာရခဲလှစွာသော သတသဟဿာရဟ ဂါထာတို့ကို သတ္တ၀ါတို့၏ စီးပွားအလို့ငှါ ချမ်းသာကို ဖြစ်စေခြင်းငှါ ကောင်းမြတ်သော သမ္မာဆန္ဒဖြင့် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါအံ့၊ အသင်တို့သည် ဤအရပ်ဋ္ဌာနသို့ လာရောက်ကြကုန်၍ ရိုသေစွာ နာယူကြပါ သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ - - -
သဟဿာရဟဂါထာတော် နတ်ချစ် ဂါထာတော်
သကိ ဒေ၀ မဟာရာဇ၊ သဗ္ဘိ ( သပ်ဘိ ) ဟောတိ သမာဂမော။
သာ နံ သင်္ဂတိ ( သင်ဂတိ ) ပါလေတိ၊ နာ သဗ္ဘိ ဗဟုသင်္ဂမော။( ဗဟု သင်ဂမော )
မင်းမြတ်. သူတော်ကောင်းတို့ နှင့် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ တွေ့ဆုံ ရခြင်းသည် မိမိဘ၀အတွက် ဘေးရန် ကင်းရှင်း ချမ်းသာရအောင် တစ်ဘ၀လုံး စောင့်ရှောက်နိုင်ပေ၏။ သူယုတ်မာတို့ နှင့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပေါင်းသင်း ရသော်လည်း ဘေးရန်အားလုံး လုံခြုံစိတ်ချရမှု့ မရှိနိုင်ပါ။
သဗ္ဘိ ရေ၀ သမာသေထ၊ သဗ္ဘိ ကုဗ္ဗေထ သန္ထ၀ံ။ ( ကုတ်ဗေထ သန်ထ၀ံ )
သတံ သဒ္ဓမ္မ ( သတ်ဒမ်မ ) မညာယ၊ ( မင်ညာယ ) သေယော ဟောတိ န ပါပိယော။
မင်းမြတ်. ဒီလိုအကြောင်းတွေကြောင့် သူတော်ကောင်းတို့နှင့် သာ ပေါင်းသင်းကာ မိတ်ဆွေဖွဲ့ သင့်တယ်၊ အကျွမ်းတ၀င် ရှိအောင် ပြုသင့်တယ်။ သူတော်ကောင်းတို့နှင့် ပေါင်းသင်းနေတဲ့အတွက် သူတော်
ကောင်းတရားတွေကို ကြားနာရပြီး ကိုယ်တိုင်လဲ သူတော်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဘယ်တော့မှ ယုတ်မာသောသူ လူမိုက် မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။
ဇီရန္တိ( ဇီ ရန်တိ ) ဝေ ရာဇရထာ သုစိတ္တာ၊( သုစိတ်တာ ) အထော သရီရမ္ပိ ( သရီရမ် ပိ ) ဇရံ ဥပေတိ။
သတဉ္စ ဓမ္မော န ဇရံ ဥပေတိ၊ သန္တော ဟဝေ သဗ္ဘိ ပဝေဒယန္တိ။
မင်းမြတ်. လှလှပပ အဆန်းတကြယ် ပြုလုပ်စီမံထားတဲ့ မင်းမြတ်ရဲ့ ၇ထားဟာ ဘယ်လောက်ပင် တောင့်တင်း ခိုင်ခံ့သော်လည်း တနေ့မှာတော့ ဆွေးမြေ့ပျက်စီးရမယ့် ဇရာ သဘောတရားကို မလွန်ဆန်နိုင်ဘူး၊ ဘုရားအစရှိသော သူတော်ကောင်းတို့ ချီးမွမ်းအပ်သော သူတော်ကောင်းတရား
ဆိုတာကတော့ ခေတ်ကာလ နှစ်ပရိစ္ဆေဒတွေ ဘယ်လောက် ကြာညောင်းနေပါစေ၊ ဆွေးမြေ့
ပျက်စီးသွားတယ်၊ အိုမင်းဟောင်းနွမ်းပြီး သုံးမရတော့ဘူးဆိုတာ မရှိနိုင်ပါဘူး။
နဘဉ္စ( နဘင် စ ) ဒူရေ ပထ၀ီ စ ဒူရေ၊ ပါရံ သမုဒ္ဒဿ ( သမုဒ် ဒတ်သ ) တဒါဟု ဒူရေ။
တတော ဟဝေ ဒူရတရံ ၀ဒန္တိ၊ သတဉ္စ ( သတဉ် စ ) ဓမ္မော အသတဉ္စ ရာဇ။
မင်းမြတ်. ကောင်းကင် နှင့် မြေပြင်ဟာ ဘယ်လိုမှ ဆက်စပ်လို့ မရအောင် သိပ်ကို ဝေးကွာပါတယ်၊ အဲဒီလိုပဲ မဟာ သမုဒ္ဒရာရဲ့ ဟိုဖက်ကမ်းနဲ့ ဒီမှာ ဘက်ကမ်း ဆိုတာကလဲ ဝေးကွာလွန်းလှတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတော်ကောင်း တရားနှင့် မသူတော်တို့၏ တရားတို့ကတော့ ကောင်းကင်နဲ့ မြေကြီး၊ သမုဒ္ဒရာ ဟိုဖက်ကမ်းနဲ့ ဒီဘက်ကမ်း ထက်ကို ဝေးကွာကြတယ်၊ အရှေ့နဲ့ အနောက်လို ဆန့်ကျင်နေကြတယ်။
ပါဠိ မဖတ်တတ်သူများအတွက် ပါဋ္ဌ်ဆင့်များကို ( ) ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။
အထက်ပါ ဂါထာတွေကတော့ တောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်၊ တနည်းအားဖြင့် ရေဆူ ဆရာတော်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးများ လက်ခံထားခဲ့ကြတဲ့ ဆရာတော်ကြီး ဦးဥတ္တမသာရ ရဲ့ ဘ၀အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အကြောင်းကို ဖတ်မိကတည်းက စာရေးသူလဲ ရွတ်ပွားနေမိတဲ့ ဓမ္မလက်ဆောင်ဂါထာလေးတွေ ပါ။ ဆရာတော်တရားဟောနေစဉ်၊ ပရိတ်ရွတ်နေစဉ်အတွင်း ဆရာတော်ရှေ့တွင် ရှိသော ရေများမှာ ဆူဝေ
လာသောကြောင့် ရေဆူဆရာတော် ဟု ခေါ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်။မေတ္တာတရားကြီးမားတော်မူသော ဆရာတော်ကြီးသည် အသွားအလာ ခက်ခဲ၍ ဝေးလံ ခေါင်းပါးသော တောင်တန်း ဒေသ များတွင် နှစ်ပေါင်း ၅၀ မျှ သီတင်းသုံး နေထိုင်လျက် ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား များအား ဗုဒ္ဓ တရား ဓမ္မများ ကျင့်ကြံ ပွားများ နိုင်ရေး အတွက် မေတ္တာတော် ကြီးမားစွာ သာသနာ ပြုတော် မူခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အာသံ ပြည်နယ်၊ မဏိပူရ ပြည်နယ်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ စစ်တကောင်း တောင်တန်း များနှင့် ဥရောပ နိုင်ငံများသို့ လှည့်လည့်ကြွရောက် သာသနာ ပြုတော် မူခဲ့သည်။
ဆရာတော်ကြီးဟာ ဘ၀တလျောက်လုံး ဒီဂါထာတွေကို အမြဲ ရွတ်ပွား သရဇ္ဈာယ်နေခဲ့တယ် ဆိုတာကို သူ့ရဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံ စာအုပ်များမှာ ဖတ်မှတ်ကြည်ညိုပြီး သိရှိခဲ့ရပါတယ်၊ကျမ်းစာအုပ်ပေါင်းများစွာ ရေးသားခဲ့တဲ့ အထဲမှာ စာရေးသူ အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်ကတော့ ချမ်းမြေ့စွာ ဘ၀နေနည်း စာအုပ်ပါပဲ၊ အင်တာနက် စာမျက်နှာများမှာ အဲဒီစာအုပ် ရှိခဲ့လျင်လည်း စာဖတ်သူများကို ဓမ္မဒါနပြုဖို့ အသိပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်၊ ဘယ်ဆိုက်မှာ ရနိုင်မလဲ ဆိုတာကို ညွန်းပေးစေချင်တယ်၊
ဆရာတော်ကြီးအသက် ထင်ရှား ရှိစဉ်က
တကယ်တော့ ဒီဂါထာတွေဟာ အများသိပြီးသားဖြစ်ကြတဲ့အတိုင်း လူသားစား ပေါရိသာဒ ဇာတ်တော်မှာ ဘုရားအလောင်းတော် မဟာသုတသောမမင်းကြီးရဲ့ လည်ချောင်းသွေးနဲ့ ပေါရိသာဒ က ယဇ်ပူဇော်ဖို့ ဖမ်းခေါ်သွားတယ်၊ ဖမ်းမိပြီးကာမှ --
အမောင် ပေါရိသာဒ အမောင်ကို တောင်းဆိုစရာ တခုရှိပါတယ်၊
ပြောပါ - ခွင့်ပြုနိုင်ရင် ပြုပါမယ် -
ဒီနေရာကို မလာခင် ငါ့မှာ ဆန္ဒတခု ရှိခဲ့တယ်၊ ဆရာနန္ဒပုဏ္ဏားဆီကနေ တရားနာယူဖို့အတွက် ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ လုပ်နေဆဲမှာပဲ ဖမ်းခေါ်လာလို့ မနာလိုက်ရသေးဘူး၊ အဲဒီတရားတော်တွေကလဲ တပုဒ် တပုဒ်ကို အသပြာ တစ်ရာ တန်တယ် လို့ ကြားသိခဲ့ရတယ်၊ အမောင် ခွင့်ပြုမယ် ဆိုရင် တရားတော်ကို နာယူပြီးမှ ငါ့ကို သတ်ပါတော့လား၊ အခုတော့ ငါ့တိုင်းပြည်ကို ပြန်ပြီး တရားနာယူပါရစေအုံး --
ဟုတ်ရဲ့လား - မင်းကြီး၊ သေရမှာ ကြောက်လို့ ဥပါယ်တံမျဉ် သုံးနေတာလား --
တည်တံ့အောင် ထိန်းသိမ်းလေ့ရှိကြတယ်၊ ငါမင်းမြတ် ကတိပေးပါတယ် -
ကောင်းပါပြီ မင်းမြတ်၊ ကတိတည်ပါစေ - သွားခွင့်ပြုပါတယ်၊ ပြန်လာဖို့ မမေ့ပါနဲ့၊
ဒီလိုနဲ့ ဘုရားအလောင်းတော် သုတသောမမင်းဟာ တရားတော်ကို နာယူပြီး ဆရာ နန္ဒပုဏ္ဏားကို သူများတွေက ဂါထာတပုဒ်ကို အသပြာ တရာနဲ့ ပူဇော်တယ်၊ ငါကတော့ ဒီလောက် တန်ဖိုး၇ှိတဲ့ တရားတော်ကို တိုင်းပြည်နဲ့ ပူဇော်လိုတယ်၊ ဆိုပြီး စိတ်ကူးရှိသော်လည်း ပုဏ္ဏားရဲ့ ရုပ်ရည် လက္ခဏာကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ရှင်ဘုရင် ရာထူးနဲ့ မထိုက်တန်တာကို သိမြင်တဲ့အတွက် ဂါထာတပုဒ်ကို အသပြာ တစ်ထောင်နဲ့ ပူဇော်မယ် ဆိုပြီး အသပြာ လေးထောင်နဲ့ ဆုချခဲ့ပြီး ပေါရိသာဒဆီ ပြန်သွားခဲ့တယ်၊
ကိုယ့်အသက် သေရမှာ ကို သိသိကြီးနဲ့ ပြန်လာတဲ့ သုတသောမမင်းကို ကြည့်ပြီး ပေါရိသာဒကလည်း အံ့သြနေရှာတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ လူသတ်သမား လူသားစား ပေါရိသာဒ ဟာ ဘုရားလောင်း သုတသောမမင်းဆီက တရားတော်ကို နာယူပြီး သူတော်ကောင်းဖြစ်ကာ အကျွတ်တရား ရသွားရှာတယ်၊
ပေါရိသာဒ နာယူခဲ့တဲ့ တရားတော်ကတော့ အထက်က ဂါထာ ( ၄ ) ပုဒ်ပါပဲ၊ ကောင်းကျိုးများစွာ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ဂါထာများကို ရွတ်ပွားခဲ့တဲ့ တောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်ကြီးကတော့ နတ်ဗြဟ္မာတွေရဲ့ ချစ်ခင်ကြင်နာမှု့ကို လိုချင်လျင် အမြဲတမ်း ရွတ်ဖတ်သင့်တယ် လို့ တိုက်တွန်းထားတယ်။ သူ့ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ တွေမှာလည်း ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ချင်းတောင်တန်း နာဂ တောင်တန်း ဒေသတွေမှာ နေသော်လည်း ဘယ်လို သားရဲတိရိစ္ဆာန် ကမှ အန္တရာယ်မပြုကြကြောင်း၊ တချို့ ကျားတွေ ဆင်တွေ ဆရာတော်ကြီး၏ ကျောင်းဝင်းအတွင်း လာရောက်အိမ်စက် အနားယူလေ့ ရှိကြကြောင်း၊ တောတောင်စောင့်နတ် ရုက္ခစိုးမှ အစ နတ်အများစုတို့သည် ညအခါ လာရောက်ဖူးမြော် မေးမြန်းကြလေ့ ရှိကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဘ၀တလျောက်လုံး ဘေးရန်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာဖြင့် ချမ်းသာစွာနေနိုင်ပြီး နတ်ဗြဟ္မာတို့ရဲ့ မေတ္တာကို ရယူလိုသူများ ရွတ်ပွားနိုင်စေရန် အသိပေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ဇာတက ဋ္ဌကထာ ၂. ၂၁. ၄၁၁
Posted by Simon Cole at 2:38 AM